China inoburitsa dhizaini yemenduru dzeBeijing 2022 Olympic
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » China inoburitsa dhizaini yemenduru dzeBeijing 2022 Olympic
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • tsika nemagariro • Entertainment • Health News • Hospitality Industry • misangano • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Sports • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
China inoburitsa dhizaini yemenduru dzeBeijing 2022 Olympic.
Yakatumidzwa zita rekuti "Tongxin", zvichireva kuti "Pamwe chete sechinhu chimwe", menduru idzi dzine mhete shanu dzakasimba dzinosanganisira huzivi hwechiChinese hwekuwirirana pakati pedenga, pasi nevanhu.
Kuparurwa kwemenduru kwakaratidza kuverengerwa kwemazuva zana kuenda kumitambo.
Mushure mekutambira zvakabudirira 2008 Summer Olympics, Beijing ichakurumidza kuve guta rekutanga kuita ese ari maviri ezhizha nechando edhisheni yemitambo yepasirese.
Beijing 2022 varongi vakasimbisa hutano nekuchengetedzeka kwevatori vechikamu sechinhu chavo chepamusoro.
Pasati papera vhiki murazvo weOlympic wasvika kuChina mushure mekunge wabatidzwa muAncient Olympia, Greece, Beijing 2022 Magadzirirwo emenduru dzeOlympic akaparurwa nhasi.
ChinaGuta guru renyika rakapemberera kuverengera kwemazuva zana kusvika ku 2022 Mitambo yeOlimpiki yechando neChipiri nechimwe chiitiko chakakosha segadziriro Beijing 2022 kuenda kumatanho avo ekupedzisira.
Yakatumidzwa zita rekuti "Tongxin", zvichireva kuti "Pamwe chete sechinhu chimwe", menduru idzi dzine mhete shanu dzakasimba dzinosanganisira huzivi hwechiChinese hwekuwirirana pakati pedenga, pasi nevanhu. Zvindori zvinomiririrawo zvindori zveOlympic, zvakavezwa mudenderedzwa remukati, uye mweya weOlympic unobatanidza nyika kuburikidza nemitambo.
Iyo menduru dhizaini yakafemerwa kubva pachidimbu cheChinese jadeware chinodaidzwa kuti "Bi", dhisiki rejade kaviri rine buri redenderedzwa pakati. Sezvo jade ichifungidzirwa sechishongo chakanaka uye chakakosha mutsika yechinyakare yeChinese, menduru iyi uchapupu hwerukudzo nekuedza kusingaperi kwevatambi.
Nedenda reCCIDID-19 richiri kuitika munzvimbo zhinji dzepasi, Beijing 2022 varongi vakadonhedza hutano nekuchengetedzeka kwevatori vechikamu sechinhu chinonyanya kukosha kwavari.
Mabhuku ekutanga eBeijing 2022 playbooks akaburitswa nemusi weMuvhuro, achipa gwara kuvamhanyi nevakuru vehurumende kuti vaone kuti gore rinouya Winter Olympic neParalympic Games inogona kuendeswa zvakachengeteka panguva yedenda.
Iwo maviri mabhuku ekutamba, rimwe revamhanyi nevakuru vechikwata, uye rimwe revamwe vese vane chekuita, anogadzirisa akakosha eCCIDID-19, kusanganisira yakavharwa-loop manejimendi, kubaya uye kuyedzwa.
Sezvakaziviswa kare, vese avo vakabaiwa zvizere nhomba yeCCIDID-19 havazofanirwa kugara vega kwemazuva makumi maviri nerimwe kana vasvika. China uye panzvimbo pacho unogona kupinda "yakavharwa-loop manejimendi system". Avo vari mukati meiyo yakavharwa-loop manejimendi system vanozoyedzwa zuva nezuva kuCOVID-19.
Yechipiri edhisheni yePlaybooks yakarongwa kuti ibudiswe muna Zvita.
Kubva Gumiguru 5, nhevedzano yemakwikwi epasi rose akaitika kuNational Speed ​​​​Skating Oval uye Capital Gymnasium mudhorobha reBeijing, uye National Sliding Center muYanqing kuyedza mashandiro akadai sekugadzira ice, nguva uye zvibodzwa, COVID-19 midziyo. , kuchengeteka uye chokufambisa.
Chiitiko chaMbudzi chichaona mutambo weWorld Cup uchiteverwa nemitambo yeWorld Cup yekukwira chando uye freeski cross, paine zviitiko zveContinental Cup zvekusvetuka svetuka uye Nordic yakasanganiswa yakarongwa muna Zvita.
Zvinofungidzirwa kuti vanosvika zviuru zviviri zvevamhanyi vekumhiri kwemakungwa nevashandi vanotsigira vanobatanidzwa pazviitiko zvebvunzo, zvichibvumira varongi kunzvimbo dzekuyedza uye mashandiro pamberi peBeijing 2,000.